Izindaba - Ngabe osikilidi bakagesi bangabasiza yini abantu ukuthi bayeke ukubhema?
Ngabe osikilidi bakagesi bangabasiza yini abantu ukuthi bayeke ukubhema?
UMeyi 31 uzongenisa uSuku lwama-33 Lomhlaba Olungenalo Ugwayi. Isiqubulo salo nyaka sokwenyusa sithi "Vikela abantu abasha kude nemikhiqizo yendabuko kagwayi nogwayi kagesi." I- "Outline of the" Healthy China 2030 "Plan" ibeka phambili inhloso yokulawulwa kukagwayi "ngonyaka ka-2030, izinga lokubhema kwabantu abaneminyaka engaphezu kwengu-15 kufanele lehliswe laya ku-20%". Imiphumela ye-2018 China Adult Tobacco Survey ikhombisile ukuthi izinga lokubhema kwabantu abaseminyakeni engaphezu kwengu-15 ezweni lami liyi-26.6%; Amaphesenti angama-22.2% abantu ababhemayo nsuku zonke aqala ukubhema nsuku zonke ngaphambi kweminyaka yobudala eyi-18. Ukufeza inhloso yokwehlisa izinga lokubhema jikelele, kuyisihluthulelo sokuvimbela abantu abasha abangakabhemi ukuthi baqale ukubhema.
Njengamanje, yize umbono wokuthi ukubhema kuyingozi empilweni ubusususelwe ezinhliziyweni zabantu, ama-e-cigarettes asebenzise ukushiyeka kwabo futhi basebenzisa imisebenzi "yokuhlanza amaphaphu", "yeka ukubhema"futhi" angilutheki "ekupakisheni nasekuhloleni, abathi i-e-cigarettes ayinayo itiyela nokumiswa. Izithako ezinobungozi ezinjengezinhlayiya zingasiza yeka ukubhema, kodwa ngabe kunjalo ngempela?
Ama-e-cigarettes akuwona umuthi omuhle yeka ukubhema
Ama-e-cigarettes ayizindlela ezingashisi kunogwayi. Bake bathathwa njengezinye izindlela kunogwayi bendabuko, kepha empeleni abakwazi ukusiza kuphelayeka ukubhema, bangenza futhi kube namathuba amaningi okuthi babe umlutha we-nicotine. Ucwaningo oluvela kwiWorld Health Organisation lukhombisile ukuthi i-aerosol yama-e-cigarettes iqukethe izinto ezinobuthi ezifana ne-nicotine futhi ikhiqiza izinhlayiya ezincane kanye ne-ultrafine. I-nicotine uqobo iyalutha futhi ingadala isifo senhliziyo. Ngisho nenani elincane lokudla lizovimbela ukukhula kwengqondo yomntwana futhi lilimaze ubuchopho bezingane. Ngaphezu kwalokho, uma ngabe i-e-cigarette ishiswa ngokushesha okukhulu, izodala into enobuthi kakhulu ebizwa nge-acrolein akuyona nje kuphela into elimaza i-retina, kodwa futhi ingadala nomdlavuza. Ngaphezu kwalokho, i-e-cigarettes ibuye ibhekane nenkinga yokubhema ugwayi wesundu. I-nicotine, izinhlayiya, i-propylene glycol, i-glycerin nezinye izinto ezinobuthi zingangena endaweni yangaphandle ngokugeleza kwentuthu e-cigarette (intuthu ekhishwa emzimbeni womuntu), yize okuqukethwe kungaphansi kukogwayi wendabuko. Kodwa-ke, ukungaqondi kahle kwabantu ngemikhiqizo ye-e-cigarette kuzokhuphula ukuvezwa kwabangabhemi ku-nicotine nezinto ezithile ezinobuthi.
NgoJulayi 2019, iWorld Health Organisation yakhipha i- "Global Tobacco Epidemic Report 2019", eyaveza ngokusobala ukuthi: Ugwayi we-E unobufakazi obunqunyelwe njengendlela yokuyeka ukubhema, futhi izifundo ezihlobene nazo aziqinisekile kangako, azikwazi ukuthola iziphetho, futhi ziya ngokwanda Ubufakazi obuningi bukhombisa ukuthi ezimeni ezithile, abasebenzisi abancane be-e-cigarette kungenzeka ukuthi baqale ukusebenzisa osikilidi bendabuko ngokuzayo.
Ukwanda kwama-e-cigarettes, igxathu negxathu kubhekiswe kubantu abasha
Imininingwane evela ku-2018 China Adult Tobacco Survey ikhombisa ukuthi iningi labantu abasebenzisa i-e-cigarettes ngabantu abasha, futhi izinga lokusetshenziswa kwama-e-cigarettes kubantu abaneminyaka eyi-15-24 yi-1.5%. Kuyaphawuleka ukuthi inani labantu abake bezwa ngogwayi e-e, abake basebenzise i-e-cigarettes phambilini, futhi manje abalisebenzisayo bakhuphukile bonke uma kuqhathaniswa nango-2015.
Abanye abakhiqizi baka-e-cigarette baheha abantu abasha ngokunikela ngama-flavour ahlukahlukene kawoyela wentuthu, njengokunambitheka kukagwayi, ukunambitheka kwezithelo, ukunambitheka kwe-bubble gum, ukunambitheka kashokoledi nokunambitheka kokhilimu. Intsha eningi idukiswa yizikhangiso futhi ikholelwa ukuthi ama-e-cigarettes "ayimikhiqizo yokuzijabulisa neyokungcebeleka". Abagcini ngokuthenga ama-adopter okuqala, kepha futhi bayabancoma kubangani. Ngakho-ke le ndlela ethandwayo "yokubhema" iye yathandwa kancane kancane kubantu abasha.
Kepha empeleni, izingxenye zamakhemikhali zama-e-cigarettes ziyinkimbinkimbi kakhulu. Ucwaningo lwamanje lwezinto ze-e-cigarette alwanele, futhi ukubhekwa kwezimakethe kusale kancane. Amanye ama-e-cigarettes "ayimikhiqizo emithathu" ngaphandle kwamazinga womkhiqizo, ukugadwa kwekhwalithi nokuhlolwa kokuphepha. Kubeke ingozi enkulu efihliwe empilweni yabathengi. Kodwa-ke, kuqhutshwa izintshisekelo, kusenabanikazi abaningi abasebenza ngokungemthetho abathengisa ama-e-cigarettes online. Muva nje, kunemibiko yezindaba yokuthi abathengi basebenzise i-e-cigarettes enezakhi zokwenziwa kwama-cannabinoids (into ekwazi ukusebenzisa ingqondo, ehlukaniswa njengomuthi ezweni lami). Nesimo sokwelashwa.
Ukubhekana ne-e-cigarettes, izwe liyathatha isinyathelo
Ngo-Agasti 2018, i-State Tobacco Monopoly Administration kanye ne-State Administration for Market Regulation yakhipha isaziso esinqabela ukuthengiswa kogwayi ngogesi kubantwana. NgoNovemba 2019, i-State Tobacco Monopoly Administration kanye ne-State Administration for Market Administration bakhipha "Isaziso Sokuvikela Abanye Abancane Kubasiki Bakwa-elekthronikhi", esidinga ukuthi izinhlangano ezahlukahlukene zemakethe zingathengisi ugwayi kubantwana; ukunxusa izinkampani zokukhiqiza nezokuthengisa noma abantu ukuthi bavale amawebhusayithi e-cigarette okuthengisa i-Intanethi noma amaklayenti ngesikhathi esifanele, amapulatifomu e-commerce ngokushesha avale izitolo ze-e-cigarette futhi asuse imikhiqizo ye-e-cigarette ngesikhathi esifanele, ukukhiqizwa kwe-e-cigarette kanye nezinkampani ezithengisa noma abantu bahoxise izikhangiso ze-e-cigarette ezifakwe ku-Intanethi, njll.